19 Mar 2018 . 3:20 PM
မြန်မာ့လက်ဝှေ့ဟာ အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ထိုးဖောက်နေတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင် ရိုးရာလက်ဝှေ့ပွဲတွေ ကျင်းပလာနိုင်တဲ့အထိ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သလို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကိုယ်ခံပညာရှင်တွေကလည်း ရိုးရာလက်ဝှေ့ကို မြေစမ်းခရမ်းပျိုး ထိုးသတ်နေကြတာကြောင့်ပါ။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ရိုးရာလက်ဝှေ့လောကမှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ရတဲ့ ကစားသမား (၅) ဦးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
စောဂေါ်မူဒိုဟာ မြန်မာပြည်အလွတ်တန်းချန်ပီယံဟောင်း လုံးချောရဲ့ တပည့်ရင်းဖြစ်ပြီး ထွန်းထွန်းမင်းကို ပထမဆုံးစိန်ခေါ်ထိုးသတ်ဖူးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်မှာတောင် စိန်ခေါ်ရဲတဲ့ ပထမဆုံးလက်ဝှေ့ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်မင်းကို ရှူံးနိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း လက်ရည်သိသိသာသာ တိုးတက်လာသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့တုန်းက ဖျံသွေးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁ဝ) ရက်နေ့မှာတော့ အစီးသရေရအောင် ထိုးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စောဂေါ်မူဒိုဟာ အရပ် ၅ပေ၇လက်မ (ခန့်) နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် ၇၁ကီလိုဂရမ် (ဝန်းကျင်) ရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖျံသွေးဟာ ၂ဝ၁၅ခုနှစ် ၇၁ကီလိုတန်းရွှေခါးပတ်ချန်ပီယံရရှိတဲ့အချိန်ကစပြီး နာမည်ကျော်လာတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ဝါရင့်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ စောဂေါ်မူဒို ၊ သပြေညိုတို့ကို အလဲထိုးအနိုင်ယူလိုက်ပြီး ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မတ်လ (၂၆) နေ့မှာ ပထမတန်းလက်ဝှေ့ကျော် စိုးလင်းဦးနဲ့ လက်ရည်တူထိုးသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ထိပ်တန်းကစားသမားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ငယ်သေးပေမယ့် နည်းစနစ်ကောင်းမွန်မှု၊ လက်သီးပြင်းထန်မှုတို့ကြောင့် အလားအလာကောင်းတဲ့ လက်ဝှေ့ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဆိုပါစေ၊ ဖျံသွေးဟာ တူးတူး၊ ထွန်းထွန်းမင်းစတဲ့ ထိပ်တန်းလက်ဝှေ့ကျော်တွေနဲ့ မထိုးဖူးသေးတဲ့အတွက် နံပါတ် (၄) မှာပဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဖျံသွေးဟာ အရပ် ၅ပေ၅လက်မ (ဝန်းကျင်) နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၇ဝကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။
စိုးလင်းဦးဟာ လက်ဝှေ့ထိုးသတ်ရာမှာ အစောပိုင်းအချီတွေမှာ သွေးအေးလေ့ရှိပြီး နောက်ပိုင်းရောက်တာနဲ့ တိုက်စစ်အားသန်လာတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်လုံကောင်းမွန်မှု ၊ ခံနိုင်ရည်ကောင်းမှု၊ အမြဲမပျတ်လေ့ကျင့်မှုတွေဟာ ပြည်သူ့အချစ်တော်စိုးလင်းဦးရဲ့ မဟာအားသာချက်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ကန်ချက်လုံးဝ မသုံးတတ်တာတွေနဲ့ သက်ကွက်မစုံတာက အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မာဂုဏ်မြင့်မှုတို့ကြောင့် သံမဏိစတားလို့ တင်စားကြတဲ့အပြင် စိတ်သဘောထားဖြူစင်မှု ၊ ရိုးသားအေးဆေးမှုတို့ကြောင့် လူချစ်လူခင်များတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မွေထိုင်းချန်ပီယံ Iquezang ကို အလဲထိုးအနိုင်ယူခဲ့ပြီး ထိုင်းကစားသမားတွေအတွက် အိပ်မက်ဆိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တခြားပြိုင်ဘက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ရင် သက်ကွက်စုံလင်မှု နှင့် ဝိတ်တန်းပိုင်းတို့မှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိပေမယ့်လည်း လေ့ကျင့်မှုပိုင်းမှာ အားသာတဲ့အတွက် နံပါတ် (၃) နေရာမှာ ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အရပ် ၅ပေ၈လက်မ (ဝန်းကျင်) နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၆၈ကီလိုဂရမ် (ဝန်းကျင်) ရှိပါတယ်။
တူးတူးကတော့ လက်ဝှေ့ထိုးသတ်ရာမှာ သွေးအေးတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး တန်ပြန်တိုက်စစ်ကောင်းမွန်မှု ၊ နည်းစနစ်ကောင်းမွန်မှုနဲ့ လက်သီးပြင်းအားတို့ကြောင့် ထိပ်တန်းကစားသမားဖြစ်နေတာပါ။ သူဟာ World Lethwei Championship (WLC) ရဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်လုံးသတ်ကွက် စုံလင်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းအချီတွေမှာ အမောမခံနိုင်တဲ့အတွက် ဝေဖန်မှုများနေတဲ့ ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ တူးတူးဟာ အရပ် ၅ပေ၉လက်မ (ဝန်းကျင်) ရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန်မှာ ၇၅ကီလိုဂရမ် (ဝန်းကျင်) ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Dave Leduc (ဒေဝ)
Dave Leduc (ဒေဝ) ဟာ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်။ Dave Leduc (ဒေဝ) ကို မြန်မာပရိသတ်တွေ သတိထားမိတာက Myanmar Lethwei World Championship (MLWC) ရဲ့ ၇၅ ကီလိုတန်းဗိုလ်လုပွဲမှာပါ။ လက်ရည်ကောင်းလှပါတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ တူးတူးကို အစီးသရေထိုးသတ်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာကို ခံယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တူးတူးကို အစီးသရေထိုးသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပွဲစီစဉ်သူတွေက မြန်မာ့လက်ဝှေ့အလွတ်တန်းချန်ပီယံ ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့မှာ ယှဉ်ပြိုင်စေပါတယ်။ သရေရလဒ်သာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေ နှစ်သက်ကြလို့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှာ ဒုတိယအကြိမ်ထိုးသတ်ကြရာမှာ တတိယအချီမှာပဲ အနိုင်ရခဲ့ပြီး မြန်မာ့လက်ဝှေ့အလွတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
(Dave Leduc (ဒေဝ) ဟာ Air KBZ အောင်လံသာ ရခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်အလွတ်တန်းချန်ပီယံအဖြစ် တချို့တွေက မသတ်မှတ်ကြပါဘူး။) ဒါပေမယ့် သူဟာ MLWC နဲ့ International Lethwei Federation Japan (ILFJ) တို့ရဲ့ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂ဝ၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၉) ရက်နေ့မှာ ထိုင်းလက်ဝှေ့ကျော် Diesellek ကို ပထမအချီမှာပဲ အလဲထိုးနိုင်ပြီး MLWC ရဲ့မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်လာပါတယ်။ အရပ် ၆ပေ၂လက်မရှိပြီး ကိုယ်အလေးချိန် ၈ဝကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။
Dave Leduc (ဒေဝ)
တူးတူးဟာ WLC ရဲ့ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်သလို Dave Leduc (ဒေဝ) ဟာ WLWC နဲ့ ILFJ တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာနှစ်လုံး ဘယ်သူက ပိုကြီးသလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကမ္ဘာကတော့ အတူတူပါပဲ။ ဘောက်ဆင်မှာလည်း WBA ၊ WBO ၊ WBC နဲ့ IBF တို့လို အဖွဲ့အစည်းတွေက ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံတွေ ပေးနေတာပါပဲ။ Dave Leduc (ဒေဝ) ဟာ တူးတူးကို အစီးသရေထိုးဖူးတာကြောင့် ဒီစာရင်းမှာ နံပါတ် (၁) ဖြစ်နေတာပါ။
အကောင်းဆုံးကစားသမား (၅) ဦးစာရင်းထဲမှာ ထွန်းထွန်းမင်းကို ထည့်မထားတဲ့အတွက် ပရိသတ်တချို့က သဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မတ်လ (၃) ရက်နေ့မှာ နီကိုးလပ်စ် ကာတာ (Nicholas Carter) ကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် အနားယူခဲ့ရပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၂) ရက်တုန်းက မွေထိုင်းထိပ်သီး ဆိုင်းယော့ (Saiyok) နဲ့ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်း ပုံမှန်လက်စွမ်းပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့အပြင် ကွန်ဂိုလက်ဝှေ့သမား Lokuku နဲ့ ထိုးသတ်တုန်းကလည်း အစီးသရေသာ ထိုးသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီစာရင်းမှာ ဖယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ထွန်းထွန်းမင်းဟာ တစ်နှစ်ကျော်အနားယူပြီး ပြန်ကစားတဲ့အချိန်မှာ ခြေကန်ချက်အားနည်းသွားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးသွားခြင်းနဲ့ ပွဲသိမ်းတိုက်ကွက်ပျောက်ဆုံးနေခြင်းကြောင့် ဒီစာရင်းမှာ ယာယီဖယ်ထုတ်ထားတာပါ။ (အခရာရဲ့သီးသန့်အမြင်ကိုသာ ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် ပရိသတ်အမြင်တွေနဲ့ လွဲကောင်းလွဲနိုင်ပါသေးတယ်။)
သွေးသစ်ဝင်းလှိုင်၊ စောဘဦး၊ ရာမာန်နဲ့ သပြေညိုနဲ့ သွေးသစ်အောင်တို့လို ကစားသမားတွေက ဒီစာရင်းမှာ မပါသေးပေမယ့် ခြိမ်းခြောက်ဖွယ်ရှိတဲ့ ကစားသမားတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ်အတွင်းမှာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာတဲ့ကစားသမားက ရာမာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ . . . အကြိုက်ဆုံးလက်ဝှေ့သမားကို ရေးသွားပေးကြပါလား။
မှတ်ချက် ။ ။ အခုဆောင်းပါးမှာ အသုံးပြုထားတဲ့ ပုံရိပ်များဟာ သက်ဆိုင်ရာမီဒီယာတွေမှာသာ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ Credit ပေးပါတယ်။
အကောငျးဆုံး မွနျမာ့ရိုးရာလကျဝှသေ့မား (၅) ဦး
မွနျမာ့လကျဝှဟေ့ာ အရှိနျအဟုနျပွငျးပွငျးနဲ့ နိုငျငံတကာကို ထိုးဖောကျနတေယျလို့ သတျမှတျလို့ရပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဂပြနျနိုငျငံ ၊ ထိုငျးနိုငျငံမှာတောငျ ရိုးရာလကျဝှပှေဲ့တှေ ကငျြးပလာနိုငျတဲ့အထိ သကျရောကျမှုရှိခဲ့သလို နိုငျငံတကာအဆငျ့မီ ကိုယျခံပညာရှငျတှကေလညျး ရိုးရာလကျဝှကေို့ မွစေမျးခရမျးပြိုး ထိုးသတျနကွေတာကွောငျ့ပါ။ အခုတဈပတျမှာတော့ ရိုးရာလကျဝှလေ့ောကမှာ အကောငျးဆုံးလို့ သတျမှတျရတဲ့ ကစားသမား (၅) ဦးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
စောဂျေါမူဒိုဟာ မွနျမာပွညျအလှတျတနျးခနျြပီယံဟောငျး လုံးခြောရဲ့ တပညျ့ရငျးဖွဈပွီး ထှနျးထှနျးမငျးကို ပထမဆုံးစိနျချေါထိုးသတျဖူးခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ ထှနျးထှနျးမငျးရဲ့ အကောငျးဆုံးအခြိနျမှာတောငျ စိနျချေါရဲတဲ့ ပထမဆုံးလကျဝှကြေ့ျောဖွဈပါတယျ။ ထှနျးထှနျမငျးကို ရှူံးနိမျ့ပွီးနောကျပိုငျး လကျရညျသိသိသာသာ တိုးတကျလာသူ ဖွဈပါတယျ။ ၂ဝ၁၆ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ (၉) ရကျနတေု့နျးက ဖြံသှေးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပမေယျ့ ၂ဝ၁၇ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ (၁ဝ) ရကျနမှေ့ာတော့ အစီးသရရေအောငျ ထိုးသတျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ စောဂျေါမူဒိုဟာ အရပျ ၅ပေ၇လကျမ (ခနျ့) နှငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ၇၁ကီလိုဂရမျ (ဝနျးကငျြ) ရှိသူလညျးဖွဈပါတယျ။
ဖြံသှေးဟာ ၂ဝ၁၅ခုနှဈ ၇၁ကီလိုတနျးရှခေါးပတျခနျြပီယံရရှိတဲ့အခြိနျကစပွီး နာမညျကြျောလာတဲ့ကစားသမားဖွဈပါတယျ။ ဝါရငျ့ကစားသမားတှဖွေဈတဲ့ စောဂျေါမူဒို ၊ သပွညေိုတို့ကို အလဲထိုးအနိုငျယူလိုကျပွီး ၂ဝ၁၇ခုနှဈ မတျလ (၂၆) နမှေ့ာ ပထမတနျးလကျဝှကြေ့ျော စိုးလငျးဦးနဲ့ လကျရညျတူထိုးသတျနိုငျခဲ့ပွီး ထိပျတနျးကစားသမားဖွဈကွောငျး သကျသပွေနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အသကျအရှယျငယျသေးပမေယျ့ နညျးစနဈကောငျးမှနျမှု၊ လကျသီးပွငျးထနျမှုတို့ကွောငျ့ အလားအလာကောငျးတဲ့ လကျဝှကြေ့ျောဖွဈပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဆိုပါစေ၊ ဖြံသှေးဟာ တူးတူး၊ ထှနျးထှနျးမငျးစတဲ့ ထိပျတနျးလကျဝှကြေ့ျောတှနေဲ့ မထိုးဖူးသေးတဲ့အတှကျ နံပါတျ (၄) မှာပဲ သတျမှတျထားပါတယျ။ ဖြံသှေးဟာ အရပျ ၅ပေ၅လကျမ (ဝနျးကငျြ) နဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ၇ဝကီလိုဂရမျရှိပါတယျ။
စိုးလငျးဦးဟာ လကျဝှထေို့းသတျရာမှာ အစောပိုငျးအခြီတှမှော သှေးအေးလရှေိ့ပွီး နောကျပိုငျးရောကျတာနဲ့ တိုကျစဈအားသနျလာတဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ သကျလုံကောငျးမှနျမှု ၊ ခံနိုငျရညျကောငျးမှု၊ အမွဲမပတျြလကေ့ငျြ့မှုတှဟော ပွညျသူ့အခဈြတျောစိုးလငျးဦးရဲ့ မဟာအားသာခကျြဖွဈပွီး အမွငျ့ကနျခကျြလုံးဝ မသုံးတတျတာတှနေဲ့ သကျကှကျမစုံတာက အားနညျးခကျြဖွဈပါတယျ။ မာဂုဏျမွငျ့မှုတို့ကွောငျ့ သံမဏိစတားလို့ တငျစားကွတဲ့အပွငျ စိတျသဘောထားဖွူစငျမှု ၊ ရိုးသားအေးဆေးမှုတို့ကွောငျ့ လူခဈြလူခငျမြားတဲ့ ကစားသမားတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ မှထေိုငျးခနျြပီယံ Iquezang ကို အလဲထိုးအနိုငျယူခဲ့ပွီး ထိုငျးကစားသမားတှအေတှကျ အိပျမကျဆိုးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
တခွားပွိုငျဘကျမြားနှငျ့ နှိုငျးယှဉျရငျ သကျကှကျစုံလငျမှု နှငျ့ ဝိတျတနျးပိုငျးတို့မှာ အားနညျးခကျြတှေ ရှိပမေယျ့လညျး လကေ့ငျြ့မှုပိုငျးမှာ အားသာတဲ့အတှကျ နံပါတျ (၃) နရောမှာ ရပျတညျနခွေငျးဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ အရပျ ၅ပေ၈လကျမ (ဝနျးကငျြ) နဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျမှာ ၆၈ကီလိုဂရမျ (ဝနျးကငျြ) ရှိပါတယျ။
တူးတူးကတော့ လကျဝှထေို့းသတျရာမှာ သှေးအေးတဲ့ ကစားသမားဖွဈပွီး တနျပွနျတိုကျစဈကောငျးမှနျမှု ၊ နညျးစနဈကောငျးမှနျမှုနဲ့ လကျသီးပွငျးအားတို့ကွောငျ့ ထိပျတနျးကစားသမားဖွဈနတောပါ။ သူဟာ World Lethwei Championship (WLC) ရဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျးကမ်ဘာ့ခနျြပီယံလညျး ဖွဈပါတယျ။ သတျလုံးသတျကှကျ စုံလငျပမေယျ့ နောကျပိုငျးအခြီတှမှော အမောမခံနိုငျတဲ့အတှကျ ဝဖေနျမှုမြားနတေဲ့ ကစားသမားပဲဖွဈပါတယျ။ တူးတူးဟာ အရပျ ၅ပေ၉လကျမ (ဝနျးကငျြ) ရှိပွီး ကိုယျအလေးခြိနျမှာ ၇၅ကီလိုဂရမျ (ဝနျးကငျြ) ဖွဈပါတယျ။
(၁) Dave Leduc (ဒဝေ)
Dave Leduc (ဒဝေ) ဟာ မွနျမာ့လကျဝှကေ့မ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈပါတယျ။ Dave Leduc (ဒဝေ) ကို မွနျမာပရိသတျတှေ သတိထားမိတာက Myanmar Lethwei World Championship (MLWC) ရဲ့ ၇၅ ကီလိုတနျးဗိုလျလုပှဲမှာပါ။ လကျရညျကောငျးလှပါတယျလို့ သတျမှတျထားကွတဲ့ တူးတူးကို အစီးသရထေိုးသတျခဲ့ပွီး ပရိသတျတှရေဲ့မတ်ေတာကို ခံယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ တူးတူးကို အစီးသရထေိုးသတျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ပှဲစီစဉျသူတှကေ မွနျမာ့လကျဝှအေ့လှတျတနျးခနျြပီယံ ထှနျးထှနျးမငျးနဲ့ ၂ဝ၁၆ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ (၉) ရကျနမှေ့ာ ယှဉျပွိုငျစပေါတယျ။ သရရေလဒျသာ ထှကျပျေါခဲ့ပမေယျ့ ပရိသတျတှေ နှဈသကျကွလို့ ဒီဇငျဘာလ (၁၁) ရကျနမှေ့ာ ဒုတိယအကွိမျထိုးသတျကွရာမှာ တတိယအခြီမှာပဲ အနိုငျရခဲ့ပွီး မွနျမာ့လကျဝှအေ့လှတျတနျးခနျြပီယံဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
(Dave Leduc (ဒဝေ) ဟာ Air KBZ အောငျလံသာ ရခဲ့ပွီး မွနျမာပွညျအလှတျတနျးခနျြပီယံအဖွဈ တခြို့တှကေ မသတျမှတျကွပါဘူး။) ဒါပမေယျ့ သူဟာ MLWC နဲ့ International Lethwei Federation Japan (ILFJ) တို့ရဲ့ မွနျမာ့လကျဝှကေ့မ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ၂ဝ၁၈ခုနှဈ သွဂုတျလ (၁၉) ရကျနမှေ့ာ ထိုငျးလကျဝှကြေ့ျော Diesellek ကို ပထမအခြီမှာပဲ အလဲထိုးနိုငျပွီး MLWC ရဲ့မွနျမာ့လကျဝှကေ့မ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈလာပါတယျ။ အရပျ ၆ပေ၂လကျမရှိပွီး ကိုယျအလေးခြိနျ ၈ဝကီလိုဂရမျရှိပါတယျ။
Dave Leduc (ဒဝေ)
တူးတူးဟာ WLC ရဲ့ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈသလို Dave Leduc (ဒဝေ) ဟာ WLWC နဲ့ ILFJ တို့ရဲ့ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာနှဈလုံး ဘယျသူက ပိုကွီးသလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယျ။ တကယျတော့ ကမ်ဘာကတော့ အတူတူပါပဲ။ ဘောကျဆငျမှာလညျး WBA ၊ WBO ၊ WBC နဲ့ IBF တို့လို အဖှဲ့အစညျးတှကေ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံတှေ ပေးနတောပါပဲ။ Dave Leduc (ဒဝေ) ဟာ တူးတူးကို အစီးသရထေိုးဖူးတာကွောငျ့ ဒီစာရငျးမှာ နံပါတျ (၁) ဖွဈနတောပါ။
အကောငျးဆုံးကစားသမား (၅) ဦးစာရငျးထဲမှာ ထှနျးထှနျးမငျးကို ထညျ့မထားတဲ့အတှကျ ပရိသတျတခြို့က သဘောထားကှဲလှဲနိုငျပါတယျ။ ၂ဝ၁၇ခုနှဈ မတျလ (၃) ရကျနမှေ့ာ နီကိုးလပျဈ ကာတာ (Nicholas Carter) ကို အနိုငျယူခဲ့တဲ့ပှဲအပွီးမှာ ဒဏျရာပွဿနာကွောငျ့ အနားယူခဲ့ရပါတယျ။ ၂ဝ၁၈ခုနှဈ ဇူလိုငျလ (၂၂) ရကျတုနျးက မှထေိုငျးထိပျသီး ဆိုငျးယော့ (Saiyok) နဲ့ ထိုးသတျခဲ့တဲ့အခါမှာလညျး ပုံမှနျလကျစှမျးပြောကျဆုံးခဲ့တဲ့အပွငျ ကှနျဂိုလကျဝှသေ့မား Lokuku နဲ့ ထိုးသတျတုနျးကလညျး အစီးသရသော ထိုးသတျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ ဒီစာရငျးမှာ ဖယျထားတာဖွဈပါတယျ။
ထှနျးထှနျးမငျးဟာ တဈနှဈကြျောအနားယူပွီး ပွနျကစားတဲ့အခြိနျမှာ ခွကေနျခကျြအားနညျးသှားခွငျး၊ ယုံကွညျမှုပြောကျဆုံးသှားခွငျးနဲ့ ပှဲသိမျးတိုကျကှကျပြောကျဆုံးနခွေငျးကွောငျ့ ဒီစာရငျးမှာ ယာယီဖယျထုတျထားတာပါ။ (အခရာရဲ့သီးသနျ့အမွငျကိုသာ ဖျောပွထားတဲ့အတှကျ ပရိသတျအမွငျတှနေဲ့ လှဲကောငျးလှဲနိုငျပါသေးတယျ။)
သှေးသဈဝငျးလှိုငျ၊ စောဘဦး၊ ရာမာနျနဲ့ သပွညေိုနဲ့ သှေးသဈအောငျတို့လို ကစားသမားတှကေ ဒီစာရငျးမှာ မပါသေးပမေယျ့ ခွိမျးခွောကျဖှယျရှိတဲ့ ကစားသမားတှပေါ။ ဒါပမေယျ့ ၂ဝ၁၇ခုနှဈအတှငျးမှာ သိသိသာသာ တိုးတကျလာတဲ့ကစားသမားက ရာမာနျပဲဖွဈပါတယျ။ ကဲ . . . အကွိုကျဆုံးလကျဝှသေ့မားကို ရေးသှားပေးကွပါလား။
မှတျခကျြ ။ ။ အခုဆောငျးပါးမှာ အသုံးပွုထားတဲ့ ပုံရိပျမြားဟာ သကျဆိုငျရာမီဒီယာတှမှောသာ ပိုငျဆိုငျပါတယျ။ Credit ပေးပါတယျ။